पढ्नुस् मिस नेपाल युनिभर्ष २०१८ मनिता देबकोटाका बारे भि'त्रि कुरा ! - Filmy News Portal Of Nepal
पढ्नुस् मिस नेपाल युनिभर्ष २०१८ मनिता देबकोटाका बारे भि’त्रि कुरा !
यस बर्ष २०१८ नेपाली ग्ल्यामर क्षेत्रको लागी धेरै उपलब्धिमुलक रहयो, एक पछी अर्को उपलब्धीहरु प्राप्त गर्दै नेपालका सुन्दरीहरुले बिश्व सामु आफ्नो र देश को नाम राखे । ति मध्येकि एउटी रहेकी छन जस्को बारेमा धेरै परिचय हामीले दीइराख्नु पर्दैन, उनको कुशल ब्यक्तित्व, सुदर अनुहार र उच्च बौद्दिक क्षमता नै उनको पहिचान बनेको छ ।
हो, हामी कुरा गर्न गईरहेका छौ मिस नेपाल २०१८ मनिता देबकोटा । २०१८ को मिस नेपाल प्रतियोगितामा मिस नेपाल युनिभर्ष २०१८ का लागी छनौट भएकी मनिताको जन्म ११ अप्रिल १९९५, गोर्खा मा भएको हो । उनको धेरै जसो बाल्यका’ल गोर्खामा नै बि’त्यो ।
उनको प्रराम्भिक शिक्षा र स्कुल गोर्खाबाट नै भएको थियो र पछी सम्पुर्ण परिवार सहित अमेरिकामा बसाई सर्दा उनले आफ्नो त्यसपछीको पढाई अमेरिकाको ईस्ट क्यारोलिना युनीभर्सिटीबाट पुरा गरिन । उनले पब्लिक हेल्थमा ब्याचलर गरेकी छिन ।
मनिताको बारेमा अरु कुरा गर्दा उनी पेशाले मोडेल र सामाजिक कार्यकर्ता हुन । उनको सौख र ईच्छाको कुरा गर्दा उनलाई एसियन खान बनाउन मन पर्नका साथै घुमन, हाईकिङ गर्न र किताबहरु पढन मन पर्दछ ।
अरु साधाहरण केटीहरु जस्तै उनलाई पनी चाडपर्बहरुमा दशै मन पर्दछ । अनि त्यस्तै मौसमको कुरा गर्दा उन्लाई मन पर्ने जाडो महिना हो । अनि कलाकारहरुमा उनलाई टम ह्यान्क्स मन पर्दछन ।